होन्डा हाइनेस सीबी ३५० को खुल्यो नेपालमा बुकिङ, बुकिङ गर्दा ५० हजार छुट ! - समृद्ध नेपाल
होन्डा हाइनेस सीबी ३५० को खुल्यो नेपालमा बुकिङ, बुकिङ गर्दा ५० हजार छुटकाठमाडौं – नेपाली बजारमा होन्डाको नयाँ बाइक हाइनेस सीबी ३५० उपलब्ध हुने भएको छ । होन्डाको आधिकारिक वितरक स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले यसको लागि अनलाइन बुकिङ लिन प्रारम्भ गरेको छ ।
१५ लिटर इन्धन ट्यांक क्षमताको यो बाइकको तौल १ सय ८१ किलोग्राम रहेको छ । झट्ट हेदा यो बाइक सानो देखिएपनि पूर्णत मेटल बडीका कारण हेभी भएको हो ।हाइनेस सीबी ३५० मा ३४८.३६ सीसीको सिंगल सिलिन्डर, एयरकुल्ड इन्जिन छ, जसले ५,५०० आरपीएममा २०.८ बीएचपी पावर र ३,००० आरपीएममा ३० एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ ।
इटहरी उवासंघमा सत्तारुढ नेकपा निकटलाई हराएर कांग्रेस निकट पुरै प्यानल नै विजयी
हाम्रो शरीरका अंगहरुबारे रमाइला र अनौठा तथ्यहरु जानुहोस !
बचाउन निकै प्रयास गर्दा पनि रहेनन् !
नेकपाको असन्तुष्ट समूहको नाममा निकालियो यस्तो विज्ञप्ति !
सारा संसारलाई रु’वाएर गए; क्यासेट टेपका आविस्कारक ओटन्सको निधन !
यो ठाउमा संक्रमण दर उच्च भए फेरि लकडाउन !
विवादपछि पहिलोपटक श्वेता भन्छिन् ` म तबसम्म निदाउदिन जबसम्म माझिबस्तिले आरामको सास फेर्दैन !